Wasaaradda Caddaaladda iyo Garsoorka ayaa dhameystirtay Xeerka Qareennada Soomaaliyeed – Kalfadhi
Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Garsoorka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya (JFS) waxa ay gacnta ku haysaa oo ay dhamaystirtay Hindisaha Xeerka Qareennada Soomaaliyeed. Xeerkan, oo ka kooban 21 bog iyo 32 qodob, waxa uu nidaaminayaa qaab-hawleedka mihnadda qareennimada JFS, si loo hubiyo sarreynta sharciga iyo xoojinta cadaaladda, waxa uuna dammaanad-qaadayaa difaaca xuquuqda dadweynaha iyo xorriyaddooda, si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka ka jira.
Sharcigani, haddii la ansixiyo, waxa uu dhisayaa 2 gudi oo kala ah Gudiga Rukhsad-Bixinta iyo Diiwaan-Gelinta Qareennada iyo Gudiga Anshaxa Qareennada, oo min 7 xubnood ka kooban, waxa uuna xuquuq iyo xasaanad siinayaa qareennada Soomaaliyeed ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba. Sidoo kale, waxa uu sugayaa aqoonta iyo garaadka qofka la siinayo rukhsadda qareennimo, mana jiro xeerjajab lagu noqon karo qareen, oo waxaa cad nooca qofka qareen noqonaya, heerarka aqoonta, waayo-aragnimada, noocyada shahaado ee la aqbalayo iyo imtixaan. Balse, imtixaanka waxaa laga dhaafayo oo kaliya qofkii shahaado PhD, oo sharciga ah wata.
Sharcigani waxa uu, sidoo kale, xirfadda qareennimo u diidayaa qof kaste oo hay’adaha dowladda ka shaqaysa sida fulinta, garsoorka, sharci-dejinta, ciidanka qalabka sida, ganacsatada waaweyn ee madaxda ka ah shirkadaha dalka ugu waaweyn, danjirayaasha iyo diblomaasiyiinta, waxaana gebi ahaanba reeban in qof qareen loogu yeero haddii aysan sidaasi diiwaanka qareennada Soomaaliyeed ugu qorneyn.
Rukhsadda qareennimo waxaa bixin doona maxkamadda sare oo heer federal ah iyo maxkamadaha kore ee heer Dowlad Goboleed. Marka uu qareenku rukhsadda ka qaato heer federal waxa uu xaq u yeelanayaa in uu ka doodi karo dhamaan maxkamadaha dalka, federal iyo dowlad goboleedba, laakiin haddii uu qareenku rukhsadda ka qaato maxmadaha kore ee maamul goboleedka waxa uu ka doodi karaa oo kaliya maxkamadaha maamul goboleedyada, waajibaadka midkastaahina waxa uu ku cadyahay sharcigan.
Sharcigu waxa uu xasaanad siinayaa qareenka, sidaa darted, xorriyaddiisa qofnimana ciriiri lama gelin karo, haddii aan loogu imaan isagoo dembi faraha kula jira. Tuhun laguma baari karo qareenka, xafiiskiisa, gurigiisa, qoraalladiisa iyo xiriirkiisa isgaarsiineed. Sharcigani waxa uu qareenka xaq u siinayaa helitaanka macluumaadka ay hayaan Booliska, Xeer-Ilaalinta, Qareennada dhinaca kale iyo Hay‟adaha Maamulka ee lidka ku ah qofka uu wakiilka ka yahay. Sidoo kale, waxa uu sharciga qareenku ka reebayaa waxyaabo dhowr ah sida dallaalnimo, dayacaadda macmiilkiisa iyo in uu laaluush qaato ama wax musuqo.
Haddii la ansixiyo, waxa uu sharcigani, sidoo kale, fursad siinayaa qareennada ajaanibta ah in ay ka doodaan maxkadaha JFS, waase haddii uu kiiska qof ajanebi ahi ku lug leeyahay, isla markaana ay qareennada Soomaaliyeed ka doodi karaan maxkamadaha dalka qareenka ajanabiga ahi ka soo jeedo. Iyada oo ay tahay inuu jiro heshiis labada dal u dhexeeyo oo arrinkaas ka hadlaya.
Guddiga Rukhsad-Bixinta iyo Diiwaan-Gelinta Qareennada Heer Federaal ayaa ka kooban yahay 7 xubnood oo kala ah:
Hal Garsoore oo ka tirsan Maxkamadda Sare, Guddoomiyaha Ururka Qareennada Soomaaliyeed, 2 xubnood oo kala ah Agaasimaha Waaxda Garsoorka & Sharci-Yaqaan ka tirsan Wasaaradda Cadaaladda Federaalka iyo 3 qareen oo uu soo magacaabo Ururka Qareennada Soomaaliyeed, Guddiga Rukhsad-Bixinta iyo Diiwaan-Gelinta Qareennada Heer Dowlad Goboleedna isla nidaamkaas, oo heerkooda waafaqsan, ayuu ku dhismayaa.
Guddiga Anshax-Marinta Qareennada ee Heer Federaal waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo kala ah:
Guddoomiyaha Ururka Qareennada Federaalka, oo noqonaya Guddoomiyaha Guddiga Anshax-Marinta Heer Federaal, afar xubnood oo ka tirsan Ururka Qareennada oo ay soo doortaan xubnaha Ururka Qareennada Heer Federaal, hal garsoore oo uu soo magacaabo Gudoomiyaha Maxkamadda Sare iyo Agaasimaha Waaxda Garsoorka ee Wasaaradda Cadaaladda Federaalka. Gudigaan, oo heer Dowlad Goboleed ahna, sidaa oo isla heerkooda ah, ayuu ku dhismayaa.
Sidoo kale, sharcigu waxa uu qaybta dambe ee qodobadiisa uga hadlayaa qaabka anshaxmarinta qareennada iyo habka lagu waayi karo rukhsadda, waxa uuna sharcigu soo jeedinayaa dhismaha Ururka Qareennada Soomaaliyeed iyo ururrada qareennada heer Dowlad Goboleed.
Sharcigan waxaa samaysay Wasaaradda Caddaaladda iyo Garsoorka JFS, ayada oo kaashanaysa Ururka Qareennada Soomaaliyeed. Waxaa la horgeyn doonaa Tubta Caddaaladda iyo Garsoorka, ayadoo haddii uu ka gudbo la horgeyn doono Golaha Wasiirrada oo u sii gudbin doona Golaha Shacabka. Marka uu maro habraaca ansixinta sharciyada ee Golaha Shacabka waxa uu aadi doonaa Aqalka Sare oo Iyaguna hab raac ansixineed marsiin doona, haddii ay ansixiyaanna waxaa loo gudbin doonaa Madaxweynaha JFS, oo markii uu saxiixo lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ee DFS, kadibna waxaa uu noqon doonaa Xeer Sharci ah, oo ay heleen Qareennada Soomaaliyeed.
Guddiga Dib U Eegista Dastuurka ayaa sheegay inuu ka shaqeynta Dastuurka ku dhameynayo waqtigii loogu talogaly